अन्तरिक्षको फोहोर खसेर जनधनको क्षति हुँदा कसले दिन्छ क्षतिपूर्ति ? - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षको फोहोर खसेर जनधनको क्षति हुँदा कसले दिन्छ क्षतिपूर्ति ? - Birgunj Sanjalअन्तरिक्षको फोहोर खसेर जनधनको क्षति हुँदा कसले दिन्छ क्षतिपूर्ति ? - Birgunj Sanjal
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार ११:४०
वीरगन्ज । निजी कम्पनीहरुको आगमनसँगै अहिले अन्तरिक्षमा यानहरुको आवागमन पनि बढिरहेको छ । यो सँगै पृथ्वीको कक्षबाट अन्तरिक्ष फोहोरको रुपमा स्याटेलाइटका टुक्रा, यान तथा स्पेस स्टेसनका फोहोरका टुक्राहरु समेत पृथ्वीमा खस्ने क्रम बढ्नेछ । हालै २० हजार किलो तौल भएको चिनियाँ स्याटेलाइटको भिमकाय टुक्रा अनियन्त्रित भएर माल्दिभ्स नजिकैको हिन्द महासागरमा खस्यो । यसअघि सन् २०२० को मे महिनामा पनि चीनको एक अर्को रकेट पनि अनियन्त्रित भएर पश्चिमी अफ्रिकी तटमा खसेको थियो।